Chọtara 172 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Ndị a bụ nna nna Jisos onye nzọpụta nwa Devidi na Eberaham.
Mgbe ahụ, Jisọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ime ka ndị ọzọ mata na ya bụ Onye nzọpụta ahụ.
Unu ekwela ka a kpọọ unu ndị ndu, nꞌihi na ọ bụ nanị otu onyendu ka unu nwere, onye bụ Onye nzọpụta ahụ.
Mgbe ndị Juu nile zukọrọ, Pailet jụrụ ha ajụjụ sị, “Onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu, ọ̀ bụ Barabas ka ọ bụ Jisọs onye a na-akpọ Onye nzọpụta?”
Pailet jụrụ ha ajụjụ sị, “Gịnị ka unu chọrọ ka m jiri Jisọs Onye nzọpụta mee?” Ha nile tiri mkpu nꞌoke olu sị, “Kpọgide ya nꞌobe!”
“Ọ na-azọpụta ndị ọzọ, ma o nweghị ike ịzọpụta onwe ya. Ị bụkwaghị eze ndị Juu? Ọ dị mma, si nꞌelu obe rịdata, anyị ga-ekwerekwa na ị bụ Onye nzọpụta.
Ma Jisọs jụrụ ha sị, “Onye ka unu onwe unu na-eche na m bụ?” Pita zara sị ya, “Ị bụ Kraịst, Onye nzọpụta ahụ anyị na-ele anya ya!”
Jisọs sịrị ha, “Lezienụ anya ka onye ọ bụla hapụ iduhie unu. Nꞌihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa nꞌaha m sị na ha bụ Onye nzọpụta ahụ. Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ mmadụ ndị ga-ege ha nti.
“Nꞌoge ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute unu sị, ‘Lee! onye a bụ Onye nzọpụta ahụ, ma ọ bụ onye ahụ bụ Onye nzọpụta ahụ,’ unu ekwela.
Nꞌihi na ọtụtụ ndị nzọpụta ụgha na ndị amụma ụgha ga-apụta ìhè nꞌoge ahụ. Ha ga-arụ ọrụ ebube ha ga-eji gbalịa ịghọgbu ndị Chineke họpụtara, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee.
Ma Jisọs ekwughị okwu ọ bụla. Ọzọ kwa, onyeisi nchụaja jụrụ Jisọs sị, “Ị̀ bụ Onye nzọpụta ahụ, Ọkpara Chineke bụ Onye a gọziri agọzi?”
Ha tikuru Jisọs sị ya, “Bịa, Onye nzọpụta, eze Izirel, si nꞌelu obe ahụ rịdata! Anyị ga-ekwerekwa na ị bụ ihe nile i kwuru na ị bụ.” Ndị ahụ akpọgidekọrọ ha na Jisọs nꞌobe nọkwa na-abụ ya ọnụ.
O nyela anyị Onye nzọpụta dị ike site nꞌezinụlọ ohu ya nwoke bụ Devidi,
“Gị nwa m nwoke, a ga-akpọ gị onye amụma nke Chineke kachasị ihe nile elu. Nꞌihi na ị ga-aga nꞌihu Onye nzọpụta ahụ, ikwado ụzọ maka ọbịbịa ya.
Nꞌihi na taa, na Betilehem, obodo Devidi, ka a nọ mụọra unu onye nzọpụta nke bụ onye ahụ Onyenwe anyị họpụtara!
Nꞌihi na anya m ahụla nzọpụta ahụ i kwere na nkwa izite, nke i kwadoro nꞌihi ndị bi nꞌụwa.
Emesịa, Simiọn gọziri ha, tụgharịa gwa Meri okwu sị ya, “Ị hụrụ nwanta a? Ọ bụ onye Chineke họpụtara ịbụ ụzọ nzọpụta na ịla nꞌiyi nye ọtụtụ ndị Izirel. Nꞌihi na ụdị ụzọ e si enwe ndụ ọhụrụ nke ọ ga-egosi ndị mmadụ, bụ ụzọ nke ọtụtụ mmadụ ga-ekwukwa okwu megide.
Mmadụ nile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke!”
Ma Jisọs jụrụ ha sị, “Unu kwanụ? Onye ka unu sị na m bụ?” Pita zara ya sị, “Ị bụ Kraịst Onye nzọpụta ahụ Chineke zitere.”
Mgbe ọtụtụ mmadụ na-abịa, na-agba Jisọs gburugburu, Jisọs gwara ha sị, “Ndị ọgbọ a bụ nnọọ ndị ọjọọ. Ha nọgidesịrị ike na-arịọ m ka m meere ha ihe ịrịba ama nke ga-egosi ha na m bụ Onye nzọpụta. Ma ọ dịghị ihe ịrịba amua ọ bụla a ga-egosi ha karịa ihe ịrịba ama Jona.
Mgbe ahụ Jisọs kpọrọ mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya gwa ha okwu sị, “Leenụ anya ugbu a, anyị na-aga Jerusalem. Nꞌebe ahụ ihe nile ndị amụma dere na ọ ga-adakwasị Onye nzọpụta ahụ ga-adakwasị m.
Ma Jisọs jụrụ ha sị, “Gịnị mere ndị mmadụ ji na-asị na Onye nzọpụta ahụ na-abịa bụ nwa Devidi?
Devidi nꞌonwe ya kpọrọ Onye nzọpụta ahụ Onyenwe anyị. Oleekwanụ otu Onye nzọpụta siri bụrụ nwa Devidi?”
Jisọs zara ha sị, “Kpacharanụ anya unu, ka onye ọ bụla hapụ iduhie unu. Nꞌihi na ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa nꞌoge dị nꞌihu, ndị ga-asị na ha bụ Kraịst, onye nzọpụta ahụ. Ha ga-asịkwa na oge ahụ eruola. Ma unu esokwala ha.
Ọtụtụ mmadụ guzoro na-ele Jisọs anya. Kama ndị ndu ndị Juu nọ na-achị ya ọchị. Ha gwara ya okwu sị, “Leenụ ya ugbu a! Ọ na-azọpụta ndị ọzọ ma o nweghị ike ịzọpụta onwe ya. A sị na ọ bụ Onye nzọpụta, onye Chineke họpụtara, ya zọpụtanụ onwe ya.”
Otu nꞌime ndị na-emebi iwu ahụ a kpọgidere nꞌelu obe nꞌụbọchị ahụ kwujọkwara Jisọs sị ya, “Ana m eche na ị bụ Onye nzọpụta. Zọpụtanụ onwe gị, zọpụtakwa anyị!”
Ọ gwara ha sị, “E dere ya rị nꞌoge gara aga na Onye nzọpụta ahụ ga-ahụ ahụhụ, nwụọ, na ọ ga-ebilikwa nꞌụbọchị nke atọ.
Nꞌihi ihe ịrịba ama nile Jisọs mere na Jerusalem, igwe mmadụ kweere na ọ bụ Onye nzọpụta ahụ nꞌezie.
Unu nile ga-agbara m ama na m gwara unu na mbụ sị, ‘Abụghị m Onye nzọpụta ahụ.’ Ọrụ m bụ nanị ikwadebere ya ụzọ, na ime ka mmadụ nile mara ya.
Nwanyị ahụ zara ya sị, “Amaara m na Onye nzọpụta ga-abịa, onye ahụ ha na-akpọ Kraịst. Mgbe ọ bịara, ọ gaeme ka ihe nile doo anyị anya.”
Mgbe ahụ Jisọs gwara ya sị, “Abụ m Onye nzọpụta ahụ!”
“Bịanụ lee nwoke gwara m ihe nile m mere! Ọ̀ ga-abụ na nwoke a bụ Onye nzọpụta ahụ?”
Ọtụtụ nꞌime ndị sitere nꞌobodo Sameria kweere na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ nꞌihi ama nwanyị ahụ gbara, na-asị, “Ọ gwara m ihe nile m mere.”
Otu mgbe ahụ nwoke a ghọtara ihe mere ahụ jiri dị nwa ya mma. Oge ahụ bụ mgbe Jisọs gwara ya sị, “Ahụ nwa gị nwoke adịla ya mma.” Nwoke ahụ na ezinụlọ ya nile kweere na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ.
Lee! Ọ na-ekwusi okwu ike ma o nweghị ihe ha na-agwa ya! Ma eleghị anya ndị isi achọpụtala na ọ bụ Onye nzọpụta ahụ ga-abịa.
Ma anyị maara ebe a mụrụ nwoke a. Mgbe Onye nzọpụta ahụ ga-abịa mmadụ ọ bụla agaghị ama ebe o siri pụta.”
Ma ọtụtụ mmadụ nọ nꞌebe ahụ kweere na ya. Ihe ha kwuru bụ nke a, “Mgbe Onye nzọpụta ahụ ga-abịa, ọ̀ ga-arụ ọrụ ebube ọzọ karịrị nke nwoke a rụrụ?”
Ụfọdụ sịrị, “Nke a bụ Onye nzọpụta ahụ e kwere na nkwa.” Ma ụfọdụ sịrị, “Onye nzọpụta ahụ e kwere na nkwa ọ̀ ga-esi Galili pụta?
Ò dị onyeisi ndị Juu ma ọ bụ onye Farisii unu hụrụ kweere na nwoke a bụ Onye nzọpụta ahụ?
Nꞌebe ahụ ndị Juu gbara ya gburugburu sị ya, “Ruo ole mgbe ka ị gaedebe anyị nꞌọnọdụ olileanya? Ọ bụrụ na ị bụ Onye nzọpụta ahụ, gwaghee anyị ọnụ!”
Mata zara ya sị, “E, Onyenwe m, ekweere m na ị bụ Onye nzọpụta ahụ. Ọkpara Chineke, Onye anyị na-ele anya ya.”
Ndị mmadụ jụrụ ya sị. “A na-akuziri anyị nꞌime akwụkwọ iwu na onye ahụ bụ Onye nzọpụta agaghị anwụ anwụ. Na ọ ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Gịnị mere i ji na-asị na Onye nzọpụta ga-anwụ?”
Kama e dere ihe ndị a nile ka unu site nꞌịgụ ya kwere na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ. Ka unu kwere na ọ bụ Ọkpara Chineke. Ọ bụrụ na unu ekwere, unu ga-enwe ndụ ọhụrụ site nꞌaha ya.
ỌLU OZI 2:36
“Ya mere, ana m eme ka ndị Izirel nile mara nke ọma, na Chineke emeela Jisọs onye unu kpọgidere nꞌobe ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Onye nzọpụta!”
ỌLU OZI 4:27
Nꞌihi na Herọd, na Pailet na ndị ụwa nile, na ndị Izirel ezukọtaala imegide Jisọs, Ohu gị dị nsọ, onye ị họpụtara ka ọ bụrụ Onye nzọpụta!
ỌLU OZI 7:52
Kpọọ onye amụma ahụ aha nke nna nna unu na-akpagbughị! Ha gburu ndị ahụ buru amụma banayere ọbịbịa onye ezi omume ahụ, bụ Onye nzọpụta ahụ unu raara nye, onye e gbukwara.
ỌLU OZI 8:12
Ma mgbe Filip kwusasịrị ozi ọma, ha kweere na Jisọs, na ọ bụ Onye nzọpụta. Ha kwekwara ihe nile Filip kwuru banyere alaeze Chineke. E mere ọtụtụ nꞌime ha baptizim, nwoke na nwanyị ha.
ỌLU OZI 9:22
Ma Sọl akwụsịghị ikwusa ozi ọma! Kama ike ikwusa ozi ọma ya na-aba ụba. Ọ gara nꞌihu imeri ndị Juu site nꞌụzọ o siri gosi ha site nꞌakwụkwọ nsọ na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ.
ỌLU OZI 10:48
Nꞌihi nke a, Saimọn Pita mere ha baptizim nꞌaha Jisọs Kraịst Onye nzọpụta. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Kọniliọs rịọrọ Pita ka o soro ya bikọọ ụbọchị ụfọdụ.
ỌLU OZI 13:23
Jisọs, onye si nꞌezinụlọ Devidi pụta, bụkwa Onye nzọpụta ahụ Chineke kwere nkwa izite.
ỌLU OZI 13:25
Nꞌoge Jọn omee baptizim na-akwado ịrụsị ọrụ ya, ọ jụrụ ndị Juu nile ajụjụ sị, ‘Unu chere na abụ m Onye nzọpụta ahụ? Ọ dịghị, abụghị m ya. Kama lezienụ anya, nꞌihi na ọ ga-abịa nꞌoge na-adịghị anya. A pụkwaghị iji m tụnyere ya, nꞌihi na etozughị m oke ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ o yi nꞌụkwụ ya.’
“Ya mere ụmụnna m, unu ụmụ Eberaham, na unu bụ ndị mba ọzọ na-asọpụrụ Chineke. Nzọpụta a dịịrị anyị nile.
ỌLU OZI 13:27
Ndị Juu bi na Jerusalem na ndị isi ha amataghị na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ. Ha aghọtakwaghị okwu nile ndị amụma dere, okwu nke a na-agụpụta na ntị ha kwa izu. Ma ha mere ka okwu ahụ ndị amụma kwuru mezuo, mgbe ha mara Jisọs ikpe ọnwụ.
ỌLU OZI 13:47
Nꞌihi na nke a bụ ihe Chineke nyere nꞌiwu mgbe o kwuru sị, ‘E meela ka unu bụrụ ìhè nye ndị mba ọzọ, ka unu site nꞌebe nile ụwa sọtụrụ dubata ha nꞌụzọ nzọpụta.’ ”
ỌLU OZI 17:3
Ọ na-akọwakwa ihe ndị amụma kwuru banyere ahụhụ nile Onye nzọpụta ga-ahụ na mbilite nꞌọnwụ ya. Site nꞌokwu ndị a o mekwara ka ha mata na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ.
Mgbe Sailas na Timoti sitere na Masidonia bịa izute Pọl, Pọl tinyere oge ya nile ikwu okwu Chineke na ịkọwara ndị Juu na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ.
ỌLU OZI 18:28
Nꞌihu ndị mmadụ nile, o guzoro kwuo okwu megide ozizi ọjọọ na ịrụ ụka nile nke ndị Juu. O gosiri ha site nꞌakwụkwọ nsọ na Jisọs bụ Onye nzọpụta ahụ.
Nꞌihi na esepụghị m aka ikwupụta nzọpụta Chineke nye unu.
ỌLU OZI 22:14
“Mgbe ahụ ka ọ gwara m sị, ‘Chineke nna anyị ha ahọpụtala gị ịmara uche ya na ịhụ Onye nzọpụta ahụ na ịnụ okwu ya.
ỌLU OZI 24:14
“Ma otu ihe ka m na-ekwupụta, ya bụ, na m kweere nꞌụzọ nzọpụta ahụ ha na-akpọ Otu onye Nazaret. Ana m eso uzọ a na-efe Chineke nna anyị ha ofufe. Ma ekwenyesịrị m ike nꞌiwu Mosisi, tinyere ihe nile e dere nꞌiwu Mosisi na nꞌakwụkwọ ndị amụma.
ỌLU OZI 26:23
Na Onye nzọpụta ahụ ga-ahụ ahụhụ bụrụkwa onye ga-esi nꞌọnwụ bilie iwetara ndị Juu na ndị mba ọzọ nzọpụta!”
ỌLU OZI 28:20
Akpọrọ m unu taa ka mụ na unu hụkọọ ka unu matakwa na anọ m nꞌagbụ nꞌihi okwukwe m kweere na Onye nzọpụta abịala.”
ỌLU OZI 28:28
Pọl kwukwara sị, “Ya mere, achọrọ m ka unu ghọta na okwu nzọpụta a si nꞌaka Chineke bịa dịkwaara ndị mba ọzọ. Ha ga-anatakwa ya.”
Ka anyị lee anya nihe ịma atụ anyị nwere nakwụkwọ nsọ. Gịnị ka anyị nwere ikwu banyere Eberaham, nna nna ndị Juu? Gịnị pụtara ìhè na ndụ Eberaham banyere inwe okwukwe na nzọpụta?
Nke a na-egosi na ọ bụghị ụmụ nile a mụrụ nꞌezinụlọ Eberaham bụ ụmụ Chineke. Kama ndị bụ ụmụ Chineke bụ ụmụ Eberaham ndị kweere nkwa nzọpụta ahụ Chineke kwere Eberaham.
Nzọpụta ahụ adịghị ajụkwa sị, “Ònye kwa pụrụ ịrịdata nꞌime ili, ime ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie dịrị ndụ ọzọ?”
O dokwara ndị Juu anya na ọ bụrụ ha ha ajụ ịnabatara onwe ha ụzọ nzọpụta a, na Chineke ga-ewere ya nye ndị ọzọ. Nꞌihi na Mosisi kwuru sị na Chineke ga-akpasu ndị Juu iwe mee ka ha kwosi ndị mba ọzọ ekworo, nꞌihi nzọpụta ọ ga-enye ndị mba ọzọ.
Mgbe ahụ a ga-azọpụta Izirel. Nꞌihi na nke a bụ ihe e dere nꞌakwụkwọ nsọ sị, “Onye nzọpụta ga-esi na Zayọn bịa. Ọ ga-eme ka ndị Juu nile site na ndụ ekweghị na Chineke tụgharịa.
1 KỌRINT 9:23
Ana m eme ihe ndị a ka ozi ọma nwee ike ruo ha nile ntị. Ana m emekwa ya nꞌihi ngọzi m na-enweta mgbe m na-ele ha ka ha na-anabata Jisọs dị ka Onyenwe ha na Onye nzọpụta ha.
Nꞌihi na ọ dịghị ozi ọma ọzọ dị, ma ọ bụghị nanị ozi ọma nzọpụta ahụ anyị kwusaara unu. Ma ụfọdụ mmadụ a, ndị na-agbanwe ozi ọma Kraịst, na eziokwu dị nꞌime ya, na-eduhie unu ime ka unu si nꞌezi ụzọ jehie.
Kama aga m abụ onye na-emebi iwu ma ọ bụrụ na m ebido na-akwalị ozizi ochie ahụ m na-agbalị ịla nꞌiyi, bụ ozizi nke na-asị na nzọpụta na-adịrị nanị ndị debere iwu ndị Juu.
Chineke zikwara m ịkọwara mmadụ nile na Chineke bụkwa onye nzọpụta nke ndị mba ọzọ. Nꞌihi na nke a bụ ihe onye kere ihe nile zubere na nzuzo ime site na mbụ.
1 TIMỌTI 2:3
Nke a bụkwa ihe dị mma na ihe na-atọ Chineke onye nzọpụta anyị ezi ụtọ.
Ugbu a oge imezu nkwa ahụ ruru, o meela ka ozi ọma a pụta ìhè. O nyefekwara m ọrụ ịgwa onye ọ bụla ihe gbasara ozi ọma a. Nkwusa nke m na-ekwusakwa ya bụ dị ka Chineke Onye nzọpụta anyị si chọọ.
Ndị nupụrụ isi natara ntaramahụhụ kwesịrị ihe ọjọọ ha mere. Ọ bụrụ na a tara ha ahụhụ nꞌihi ihe ọjọọ ha mere, anyị ga-esi aṅaa gbanarị ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na anyị elefuo oke nzọpụta ahụ anya, bụ nke Kraịst wetara? Ọ dịghị! anyị apụghị ịgbanarị ahụhụ. Onyenwe anyị nꞌonwe ya kwuru okwu nzọpụta a. Ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị nụrụ okwu ya kwukwara ya, gosi anyị na ọ bụ eziokwu.
E mere ka ọ bụrụ ihe ziri ezi nꞌanya Chineke, onye kere ihe nile, na Jisọs ga-ahụ ahụhụ. Nꞌihi na Chineke sitere nꞌọnwụ ya mee ka ọtụtụ mmadụ bịaruo nso nzọpụta. Ma ahụhụ Jisọs hụrụ mere ya ka ọ bụrụ onyeisi zuru oke nke nwere ike iduba ndị ya na mmeri nke nzọpụta.
Ma Kraịst sitere nꞌahụhụ ghọọ onye zuru oke. Ọ ghọrọ ụzọ nzọpụta zuru oke, nye mmadụ nile bụ ndị na-erubere ya isi.
Otu mgbe nanị ka Kraịst bara nꞌebe kachasị nsọ nke ụlọ ikwu ahụ. O jighị ọbara ewu na ọbara ebule chụọ aja. Kama o jiri ọbara nke ya onwe ya. O jiri ọbara ya chụọ aja nanị otu mgbe. O sitere na nke a mee ka anyị nweta nzọpụta ebighị ebi.
otu a kwa, Kraịst nwụrụ nanị otu ugboro, dị ka aja a chụrụ nꞌihi mmehie mmadụ nile. Ọ nwụrụ ma Chineke mere ka o site nꞌọnwụ bilie. Ọ ga-abịa ọzọ! Ma ọ bụghị maka ịchụ aja ọzọ nꞌihi mmehie anyị, kama ọ ga-abịa iwetara ndị nile ji okwukwe na olileanya na-eche ọbịbịa ya nzọpụta.
Nzọpụta a bụ ihe ndị amụma na-aghọtaghị nke ọma. Ha dere ọtụtụ ihe banyere ya, jụọkwa ọtụtụ ajụjụ banyere ihe nzọpụta ahụ pụtara.
Ọ bụ Saịmọn Pita, odibo Jisọs Kraịst na onyeozi na-edegara ndị nile nwere ụdị okwukwe anyị nwere akwụkwọ a. Okwukwe m na-ekwu ihe banyere ya bụ ụdị okwukwe ahụ Jisọs Kraịst Chineke anyị na Onye nzọpụta anyị na-enye. Ọ bụ okwukwe dị oke ọnụ ahịa, nke na-egosikwa ịdị mma onye nyere anyị ya.
2 PITA 1:4
Ọ bụkwa site nꞌike aka ya ka o ji nye anyị onyinye ahụ dị ukwuu, nke o kwere anyị na nkwa. Nkwa o kwere anyị, nke o mezuru, bụ nzọpụta ọ zọpụtara anyị site nꞌagụụ ihe ọjọọ nile, na ndụ rere ure nile dị nꞌụwa, na inye anyị ọdịdị ya onwe ya bụ Chineke.
2 PITA 1:11
Chineke ga-emeghekwara unu ụzọ, nye unu ike ịbanye nꞌalaeze ahụ na-adịgide adịgide, bụ alaeze Onyenwe anyị na Onye nzọpụta anyị Jisọs Kraịst.
Ha na-agwa ndị a ha na-eduhie okwu sị, “A zọpụtaghị unu nꞌihi ọrụ ọma unu rụrụ, ya mere ọ bụghị ihe ọjọọ ma unu gaa nꞌihu ime mmehie. Nꞌihi nzọpụta a zọpụtara unu, unu enwerela onwe unu, meenụ ihe ọ bụla dị unu mma nꞌanya.” Ma ndị ozizi a na-ezi ndị ọzọ ụzọ ha ga-esi nwere onwe ha site nꞌiwu, bụ ohu mmehie na ịla nꞌiyi nꞌonwe ha. Nꞌihi na mmadụ bụ ohu nye ihe ọ bụla na-achị ya.
2 PITA 2:20
Mgbe mmadụ sitere nꞌụzọ ọjọọ nke ụwa gbapụ, nꞌihi na ọ mụtala ihe banyere Onyenwe anyị na Onye nzọpụta anyị Jisọs Kraịst, ọ ga-abụ onye ọnọdụ ya ga-ajọ njọ karịa ka ọ dị na mbụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ emesịa bido ime mmehie, nke ga-eme ka ọ ghọọ ohu mmehie.
2 PITA 3:2
Nꞌime ha abụọ ihe m mere bụ ichetara unu ihe ndị ahụ nile unu maara, nke bụ ihe nile unu mụtara site nꞌaka ndị amụma dị nsọ, na site nꞌọnụ anyị bụ ndị ozi, ndị wetaara unu okwu Onyenwe anyị na Onye nzọpụta anyị.
1 JỌN 2:12
Ana m edere unu ihe ndị a ụmụntakịrị m nꞌihi na a gbagharala unu mmehie nile site nꞌaha Jisọs Onye nzọpụta anyị.
1 JỌN 4:14
Karịsịa, anyị ejirila anya anyị hụ Ọkpara ahụ Chineke zitere. Ugbu a anyị na-akọrọ ụwa nile na Chineke zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta ụwa.
1 JỌN 5:1
Ọ bụrụ na i kwere nꞌezie na Jisọs bụ Kraịst onye nzọpụta gị na Ọkpara Chineke, ị bụ nwa Chineke. Ndị nile kwa hụrụ Chineke nꞌanya naahụkwa ụmụ Chineke nꞌanya.
Ndị m hụrụ nꞌanya, ọ gụọla m agụụ idere unu akwụkwọ banyere nzọpụta ahụ anyị nwekọrọ nꞌotu, ma a chọpụtara m na ọ dị mkpa ugbu a ịdọ unu aka na ntị ka unu na-agbalịsị ike ichebe okwukwe ahụ Chineke nyere ndị ya, ka a ghara ịgbanwe ya.
Ha nile nọ na-eti mkpu nke ukwuu na-asị, “Nzọpụta na-abịa site nꞌaka Chineke anyị onye nọ nꞌelu ocheeze ya. Ọ na-abịakwa site nꞌaka Nwa atụrụ ahụ.”